VaTsvangirai Vanosvitsa Gakava Ravo naVaMugabe muSupreme Court
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri webato reMDC VaMorgan Tsvangirai, vakwira kudare redzimhosva repamusoro soro, kana kuti Supreme Court, vachida kuti dare iri ripe mutongo waro pamusoro pegakava riri pakati pavo ivo VaTsvangirai nemutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe.
VaTsvangirai vanoti VaMugabe vari kutyora chibvumirano cheGlobal Political Agreement, icho chino chengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika, kuburikidza nechikamu cheConstitutional Amendment Bill Number 19.
VaTsvangirai vari kuti VaMugabe vakatyora chibvumirano ichi pavakudoma magavhuna gumi ematunhu emunyika vasina kugara pasi naivo VaTsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC, VaArthur Mutambara, sezvinodiwa nechibvumirano chavakanyorerana musi wa15 Gunyana 2008.
VaTsvangirai, vachimirirwa negweta ravo, VaSelby Hwacha, vari kuda kuti dare rimise VaMugabe kuramba vachiita madiro ajojina mukugadza vakuru vakuru muhurumende, vasina kutanga vagara pasi nevamwe vavo.
VaTsvangirai vanoti vari kupinza nyaya iyi mudare sezvo vari mumwe wevatungamiri muhurumende vanofanirwa kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa nemunhu wese, kusanganisirawo hurumende naVaMugabe.
VaTsvangirai vanoti vari kuita izvi zvakare sechizvarwa chenyika chine mvumo yekuzivisa matare panenge pachityorwa bumbiro renyika.
Vamwe vakwirirwawo dare naVaTsvangirai magavhuna gumi akadomwa naVaMugabe pamwe negurukota rezvematunhu, VaIgnatius Chombo, avo vane bazi rinoshanda nemagavhuna aya.
Studio7 hatina kukwanisa kubata gweta raVaTsvangirai VaHwacha, kuti tinzwe kana VaMugabe vanga vasvitsawo mapepa avo ekupikisa VaTsvangirai sezvinodiwa nemitemo yematare.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vaudza Studio7 kuti VaTsvangirai vari kurova dohwe rimwe chete netsvimbo mbiri, sezvo vakakwidzawo nyaya iyi kuSADC neEU.